Ch 1 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 1 John
1:1 Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny.
1:2 Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany.
1:3 Nahariana ny zavatra rehetra amin'ny alalany, ary na inona na inona izay natao natao raha tsy Azy.
1:4 Ny fiainana tao Aminy, ary ny fiainana no fanazavana ny olona.
1:5 Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy.
1:6 Nisy lehilahy nirahin'Andriamanitra, Jaona no anarany.
1:7 Izy tonga ho vavolombelona mba hanolotra ho vavolombelona hanambara ny Mazava, mba hino rehetra noho ny teniny.
1:8 Izy anefa no Ilay Mazava, fa izy dia ny hanolotra ho vavolombelona hanambara ny Mazava.
1:9 Tao ny tena Mazava, izay manazava ny olona rehetra, ho avy amin'izao tontolo izao.
1:10 Teo amin'izao tontolo izao, ary no nanaovana izao tontolo alalany, ary izao tontolo izao tsy nahalala Azy.
1:11 Dia nandeha ho any an-, ary ny tsy manaiky azy.
1:12 Kanefa na iza na iza no manaiky Azy, ireo izay nino ny anarany, dia nomeny azy ny hery ho tonga zanak 'Andriamanitra.
1:13 Ireo teraka, tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra.
1:14 Ary ny Teny dia tonga nofo, ary nonina teo amintsika, ary hitanay ny voninahiny, voninahitra tahaka ny an'ny lahitokana avy amin'ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana.
1:15 John manolotra fijoroana ho vavolombelona momba azy, ary mitaraina, nanao hoe:: "Izao no iray momba Ilay nolazaiko hoe:: 'Izay ho avy hanaraka Ahy, efa napetraka mialoha ny ahy, satria nisy talohako. ' "
1:16 Ary avy amin'ny hafenoany, isika rehetra efa nandray, dia fahasoavana anampy fahasoavana.
1:17 Fa ny lalàna dia nomena na dia i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
1:18 Tsy nisy nahita an'Andriamanitra; ny Zanaka lahitokana, Izay ao an-tratran'ny 'ny Ray, Izy mihitsy no nilaza azy.
1:19 Ary izao no nambaran'i Jaona, raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema hankany aminy, ka dia mba hanontany azy, "Iza ianao?"
1:20 Ary nilaza marina izy ka tsy nandà izany; ary inona no nilaza marina izy dia: "Tsy izaho no Kristy."
1:21 Ary izy ireo nanontany azy: "Dia inona moa ianao? Ve ianao Elia?"Ary hoy izy:, "Tsy izy aho." "Ianao ve Ilay Mpaminany?"Ary izy namaly, "Tsia"
1:22 Noho izany, hoy ireo taminy:: "Iza ianao, ka dia mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay? Lazainao ho iza moa ny tenanao?"
1:23 Hoy izy, "Izaho no nisy feo miantso mafy any an-efitra, 'Ataovy mahitsy ny lalan'i Jehovah,'Araka Hoy i Isaia mpaminany. "
1:24 Ary ny sasany izay efa iraka avy tamin'ny Fariseo.
1:25 Ary izy ireo nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe:, "Koa nahoana ianao no manao batisa, raha tsy ianao no Kristy, fa tsy i Elia, fa tsy ny Mpaminany?"
1:26 Jaona namaly azy ireo hoe:: "Izaho manao batisa amin'ny rano. Fa eo aminao mijoro iray, izay tsy fantatrao.
1:27 Toy izany koa izay ho avy hanaraka Ahy, izay efa napetraka mialoha ny ahy, ny laces ny kapany aza aho ka tsy miendrika hamaha. "
1:28 Izany zavatra izany dia nitranga in Bethania, ampitan'i Jordana, izay nanaovan'i Jaona batisa.
1:29 Ny andro manaraka, Jaona dia nahita an'i Jesosy avy manatona azy, ary hoy izy:: "Indro, ny Zanakondrin 'Andriamanitra. Indro, izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao.
1:30 Izany no iray momba Ilay nolazaiko hoe:, 'Rehefa tonga amiko ny olona, izay efa napetraka mialoha ny ahy, satria efa nisy talohako. '
1:31 Ary izaho tsy nahalala Azy. Kanefa dia ho izany izay nihaviako manao batisa amin'ny rano: ka dia mba haseho amin'ny Isiraely. "
1:32 Ary Jaona nanatitra fijoroana ho vavolombelona, nanao hoe:: "Fa Izaho nahita ny Fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voro-mailala; ary nitoetra teo amboniny.
1:33 Ary izaho tsy nahalala Azy. Fa Izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko: 'Ary noho izay dia hahita ny Fanahy Masina nidina teo amboniny sy itoerany, izany no ilay Mpanao batisa amin'ny Fanahy Masina. '
1:34 Ary hitako fa, indro, dia natolotro fijoroana ho vavolombelona: fa Izy no Zanak 'Andriamanitra. "
1:35 Ny ampitson'iny indray, Dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy.
1:36 Ary vao nahita an'i Jesosy nitsangantsangana, hoy izy:, "Indro, ny Zanakondrin 'Andriamanitra. "
1:37 Ary ireo mpianatra roa lahy ireo nihaino azy niteny. Dia nanaraka an'i Jesosy.
1:38 Avy eo Jesosy, nihodina ka nahita azy ireo nanaraka azy, hoy izy taminy, "Inona no mitady?"Ary hoy izy ireo taminy, "Rabbi (izay midika hoe ao amin'ny fandikan-teny, Mpampianatra), aiza ianao no mipetraka?"
1:39 Ary hoy izy taminy, "Avia fa ho hitanareo." Dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary dia tokony ho ora fahafolo.
1:40 ary Andrew, ny rahalahin'i Simona Petera,, no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny momba azy avy Jaona ka nanaraka an'i Jesosy.
1:41 Voalohany, dia nahita an'i Simona rahalahiny, ka hoy izy taminy:, "Efa hitanay ny Mesia," (izay adika ho toy ny an'i Kristy).
1:42 Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy. Ary Jesosy, nandinika azy, nanao hoe:: "Ianao no Simona, zanak'i Jaona. Ianao hatao hoe Kefasy," (izay adika hoe Petera).
1:43 Ny andro manaraka, dia te-handeha ho any Galilia, ary nahita an'i Filipo. Ary hoy Jesosy taminy:, "Araho aho."
1:44 I Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andrea sy Petera.
1:45 Filipo kosa nahita an'i Natanaela, ka hoy izy taminy:, "Efa hitanay ny olona momba izay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny Lalàna sy ny Mpaminany: Jesosy, ny zanak'i Josefa, avy any Nazareta. "
1:46 Ary hoy Natanaela taminy, "Misy zava-tsoa ho avy any Nazareta?"Dia hoy Filipo taminy, "Avia fa ho hitanareo."
1:47 Jesosy nahita an'i Natanaela avy manatona azy, ka hoy izy momba azy, "Indro, Israelita izay tena tsy misy fitaka. "
1:48 Hoy Natanaela taminy, "Avy aiza no ahafantaranao ahy?"Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Fony tsy mbola niantso anao Filipo, rehefa teo ambany aviavy, Hitako ianao."
1:49 Natanaela namaly azy ka nanao hoe:: "Rabbi, Hianao no Zanak'Andriamanitra. Hianao no Mpanjakan'ny Isiraely. "
1:50 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: "Satria Efa nolazaiko taminareo fa fa hitako teo ambany aviavy, inoanao. Zavatra lehibe noho izany, ho hitanao eo."
1:51 Ary hoy izy taminy:, "Amen, amena, Lazaiko aminareo, dia ho hitanareo ny lanitra misokatra, sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny Zanak'olona. "